मुद्रा रहित अर्थतन्त्र !| Nepal Pati
पछिल्लो समय बढ्दो इन्टरनेटको प्रयोग र इन्टरनेटको मार्फत गरिने व्यापार(इ- कमर्स)ले मुद्रा रहित अर्थतन्त्रको अवधारणालाई जोडतोडले अगाडि ल्याएको छ । सामान्यतया भौतिक मुद्राको प्रयोग भइरहेको यो समयमा भौतिक मुद्रा विस्थापन गरि डिजीटल प्रविधिबाट कारोबार गर्नु भनेको मुद्रा रहित अर्थतन्त्रको मूल अवधारणा हो । सरल रुपमा हेर्दा आर्थिक कारोबारहरु क्रेडिट कार्ड, अनलाइन बैंकिङ, इ- वालेट या क्रिप्टो करेन्सी लगाएत प्रविधिबाट गरिने प्रक्रिया भनेको नै मुद्रा रहित अर्थतन्त्र हुनु हो ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा सानोठुलो रुपमा प्रयोगमा आइसकेको यो अवधारणा पछिल्लो समय नेपालमा पनि भित्रिएको छ । यसको सफल उदाहरणको रुपमा इ-सेवा, खल्ती आदिलाई लिन सकिन्छ । तर यस अवधारणाको बढ्दो प्रयोगसँगै यससँग सम्बन्धित चुनौतीहरु पनि बढिरहेको छ ।
झट्ट हेर्दा निकै सरल देखिने यस प्रविधिमा पहिलो चुनौती बनेर सुचना प्रविधिको विकासको पाटो नै आउँछ । नेपालमा यो प्रविधि भित्रिदै गर्दा या नेपालले मुद्रारहित अर्थतन्त्र सानै भएपनि प्रयोगमा ल्याउदै गर्दा यो प्रश्न उठ्दछ कि ‘के नेपालमा सुचना प्रविधिले यसको पूर्ण प्रयोग सम्भव बनाएको छ ?’ यो प्रश्न अहम् बनेर किन पनि उठ्दछ भने नेपालको सूचना प्रविधि अहिलेसम्म सहर केन्द्रित मात्रै छ । नेपालमै अझै यस्ता पनि ठाउँहरु छन्, जहाँ इन्टरनेट त धेरै टाढाको कुरा सामान्य टेलिफोनको समेत सुविधा छैन । यस्तो अवस्थामा मुद्रा रहित अर्थतन्त्र फस्टाउन सक्ला र ?
दोस्रो चुनौती बनेर सुरक्षाको पाटो आउँछ । इन्टरनेट को बढ्दो प्रयोगसँगै यसको गलत प्रयोग र साइबर क्राइम पनि बढ्दै गएको छ । विभिन्न बैंकहरु, एटिएमहरुबाट या स्विफट ह्याक गरेर पैसा चोरी भइरहेको यस समयमा इन्टरनेटलाई नै मुख्य आधार बनाएर आएको यस अवधारणाको कसरी सुरक्षा गर्न सकिन्छ ? निकै सुरक्षित मानिने बैंक तथा विभिन्न सरकारी साइटहरु एक पछी अर्को ह्याक भइरहेको यस समयमा इ-वालेट, इन्ट्रान्ड़ोक्सन कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिनु स्वाभिविक नै हो । र, यदि यस्तो भएको अवस्थामा के हुन्छ ?
हुन त विद्दुतीय कारोबारलाई नियमन गर्न विद्दुतीय कारोबार ऐन -२००६ लागु छ । यस ऐन अनुसार कसैलाई विद्दुतीय माध्यमको प्रयोगबाट कुनै अपराध गरिएको पाईएमा थोरैमा रु. ५०,००० या ६ महिना जेल या दुवै हुन सक्ने प्रावाधन छ । यस्तै गरि अपराधका प्रकृति अनुसार जरिवाना र सजाय बढ्दै गएको छ । तर यसको कार्यन्वयनको पाटो फितलो देखिएको छ । एक त पर्याप्त प्राविधिक विकास नहुनु र दक्ष प्राविधिकहरुको कमीले पनि यस्तो यो समस्या आइपरेको छ । र, अर्को कुरा के भने आवश्यक परिमार्जनमा पनि अभाव खड्किएको छ । ऐनमा लेखिएका भन्दा नयाँ र नौलो प्रवृतिका अपराधहरु पनि बढीरहेकाले पनि परिमार्जन आवश्यक भएको हो ।
तसर्थ, मुद्रा रहित अर्थतन्त्र बन्ने होडबाजी चलिरहेको यस अवस्थामा पहिलो आफ्नो घाँटी हेर्नुपर्दछ । स्विडेन पहिलो मुद्रा रहित अर्थतन्त्र भएको मुलुक बने लगत्तै धेरै मुलुकहरु पछिल्लो समय यस तर्फ अग्रसर भएका छन् ।